Nokia 7: Voamarina ny famaritana, ny vidiny ary ny fandefasana | Androidsis
Nokia dia iray amin'ireo mpandray anjara mavitrika amin'ity taona 2017. Niverina niverina tamin'ny alàlan'ny fandefasana telefaona maro ny orinasa finoa, anisan'izany ny Nokia 8. Ireo famoahana ireo dia mitondra anao valiny tena tsara ho an'ny orinasa.
La mid-range manome anao fifaliana maro izany hatreto. Noho io antony io dia manolotra ny telefaona finday antonony vaovao ny orinasa. Momba an'io Nokia 7. Fitaovana natomboka ho an'ny malaza be mpitia eo afovoany premium izay mampanantena hitondra fahombiazana bebe kokoa ho an'ny orinasa.
El Nokia 7 dia mandeha amin'ny Android 7.1.2 Nougat, na dia tsy maintsy tsaroana aza fa nanamafy i Nokia fa hanavao ny findainy rehetra Android Oreo. Ka ity fitaovana ity koa dia ao amin'io lisitra io. Ny famolavolana ny telefaona dia zavatra manintona ny maro. Nahoana? Io finday io dia miala amin'ny fijerena sary tsy dia bezel.
1 Famaritana Nokia 7
2 Ny vidiny sy ny fividianana Nokia 7
Famaritana Nokia 7
Raha izany dia, zana-kazo ambony sy ambany malalaka sy tononina izy ireo. Na dia tsy esorin'izy ireo aza ny hevitra amin'ny fomba. Ny Nokia 7 dia manana Efijery 5,2 inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD. Miandry antsika ny ao anatiny Snapdragon 630 amin'ny maha processeur sy GPU Adreno 508 azy.
Ho an'ny RAM sy fitehirizana, Nokia dia manolo-tena amin'ny fikirakirana mendrika ny avo lenta. Ny telefaona dia mandefa configurations RAM roa hisafidianana, 4GB na 6GB. Ho an'ny fitehirizana dia iray ihany ny safidy azo atao, dia ny anao 64 GB. Tsy mbola nilaza ny Nokia raha azo atao ny manitatra azy ireo amin'ny alàlan'ny microSD. Manantena izahay fa hanao izany tsy ho ela izy ireo.
Ny fizarana fakana sary an'ity Nokia 7 ity dia tsy mahadiso fanantenana ihany koa ho an'ny antonony. ny fakan-tsary eo aloha ny telefaona dia avy 5 megapixels, miaraka amina f / 2.0 aperture. ny fakan-tsary aoriana dia 16 megapixels ary manasongadina taratra LED taratra roa sy aperture f / 1.8. Tsy manao koa ny azy bateria 3.000 mAh miaraka amina fiampangana haingana.
Ny vidiny sy ny fividianana Nokia 7
Ny telefaona dia hanomboka amin'ny 24 Oktobra any China. Hatreto dia mbola tsy misy fantatra ny momba ny fanombohany amin'ny tsena hafa, na dia antenainay hampiseho izany vaovao izany tsy ho ela aza ny orinasa. Raha ny vidiny, araka ny fantatrao dia misy dikan-roa an'io Nokia 7.
Ny kinova miaraka amin'i 4 GB an'ny RAM hanana vidiny eo ho eo 287 euros Amin'ny fanovana. Ny kinova miaraka amin'i 6 GB an'ny RAM dia ho lafo kokoa, miaraka amin'ny vidiny 346 euros. Ankoatr'izay dia havoaka amin'ny loko roa (mainty sy fotsy) izy io. Ahoana ny hevitrao momba ny elanelam-potoana premium vaovao eo amin'ny Nokia?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nokia 7: ny eo afovoany premium an'ny Nokia vaovao
Tsy somary lafo ve izany amin'ireo endri-javatra teknika arosony? Mahita telefaona misy 4GB / 64GB, fakan-tsary 4 ary efijery tsy manam-petra 18.9 toa ny Blackview S8 izay 127 € fotsiny aho ary toa ahy izany